ဇီ တိုက်မဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ် – Chicken soup for …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဇီ တိုက်မဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ် – Chicken soup for ….	29
ဇီ တိုက်မဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ် – Chicken soup for ….
Posted by ဇီဇီ on Apr 28, 2016 in Creative Writing, Ideas & Plans, My Dear Diary | 29 comments
အမှန်တော့ …. ရုံးပြောင်းလို့ မအားတာရယ်၊
ဒရမ်မာ အခန်းဆက်ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ အိပ်ရေးပျက်တာရယ်၊
တဂျီး ဆိုက် ဖွင့်လိုက်တိုင်း ပေါ့ပတ်တွေ အရမ်းတက်လာတာရယ်နဲ့ စာမရေးဖြစ်တာ။
(ဘူမှလည်း မမျှော်ပဲ ဂလို လူအထင်ကြီးအောင် လျှောက်ပြောရတာရယ်)
ရေးချင်ပြီး ရေးထားတဲ့ ပို့(စ) ၃ ပုဒ်လောက်က တန်းလန်းး
ဆိုတော့ အားတိုင်း ဖွဘုတ်က အမျိုးတွေကို အတင်းရော ဇွတ်ရော အဒမရော ရိုက်ထားတဲ့ လက်ချာတွေကို ဇီ တိုက်မဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ် အနေနဲ့ တင်ပါမယ် (အိုင်ဒီယာကို အရီးကို ခွက်ဒစ်ပေးပါတယ်)
ဇီ ရဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်ဆိုတော့ ချဉ်စပ်ဖြစ်နေရင်တော့ သည်းခံပေါ့နော့။
ကိုယ့် အတွေ့အကြုံရယ်၊ အတွေးတွေရယ်ပေါင်းပြီး ချချရေးထားတာပဲ။
အမယ်မယ် အမဝေကတော့ဖြင့် အားပေးချက်က မတင်ဖြစ်နဲ့ နေ့ကို လာမေးနေတယ်။ ဒီနေ့ လက်ချား မတင်သေးဘူးလားတဲ့။
ညင်းညင်းညင်း (ညင်း နဲ့ လက်ချားနဲ့ အံကိုက်ပဲနော်) ဆိုတော့ ဘုံမြှောက်တဲ့ အနည်းဆုံး တစ်ယောက်တော့ ရှိတာမို့ ဒီ အရူးမက အဲ အဲ၊ ဟွာလေ ဇီးသီးခြောက် ကောက်စားရ ကောက်စားရ ရေးအူးမှာ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘောင်ခတ်ထားတာ တော်ရုံပဲ ကောင်းတယ်။
ကိုယ်ခတ်ထားတဲ့ ဘောင်ထဲက ထွက်ချင်တဲ့ အခါ မထွက်နိုင်တဲ့ ဒုက္ခတွေ မခံရဘူးမချင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာရယ်လို့ သတ်မှတ်နေကြမှာပဲ။
“ငါ က အချစ်ကို ဦးစားမပေးတတ်ဘူးး”
“ငါ က ငါ့ကို သစ္စာဖောက်ရင် ခွင့်မလွှတ်တတ်ဘူးး”
“ငါ ဆို တဲ့ မိန်းမက ငါ့ ကို ကြောရင် ဘယ်လို လက်စားချေတတ်တာ” ဘာညာ သရကာ စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။
တ ငါ …..ငါ …
ငါက ဘယ်လို ငါက ဘယ်ညာ နဲ့ ကိုယ့်ဟာကို သတ်မှတ်ဘောင်ခတ်ပြီး …….
ကြာတော့ နည်းနည်းလေး အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တာတောင် ထွက်မရတော့တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။
ဘာရယ်မဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမနေတာပါ။
နှစ်ကူးမှာ လိမ္မာပါ ချွိချွိရယ်။ နောင်နှစ် အစားပိုကျွေးပါ့မယ်။
စိတ်ထဲ အမုန်းစိတ် မဝင်အောင် ကြိုးစားနေနေရတယ်..
လက်ငင်း အကျိုး အရတော့ အသက်တို ရောဂါထူ ရုပ်ဆိုးလို့…
ထပ်ကြောက်တာကတော့ အမုန်းစိတ်ရဲ့နောက်က လိုက်တဲ့ ကံ၃ ပါး ကိုပဲ..
ပဒါစာရီ ဇာတ် ကို ကြားဖူးကြမှာပေါ့…
မောင် စတဲ့ ၆ ယောက် သူ့မျက်စိရှေ့မှာတင် သေဆုံးတာ မြင်ရလို့ ရင်ကွဲ ပက်လက်ဖြစ်ရတာာ…
ဒီဇာတ်နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားတစ်ခုရှိတယ်.. မိုးကုတ်ဆရာတော်ဟောတဲ့ တရားးထဲက နာဖူးတယ်မှတ်တာပဲ.. မှားရင် … လိုအပ်ရင် .. ပြင်ပေးကြအူးးးး
မပဒါ အရင်ဘဝက သူ့ မုန်းမိတဲ့ လူ ၆ ယောက်ကို ကျိန်ဖူးတာ.. သူ့ရှေ့မှာတင် အသေဆိုးနဲ့ သေတာ မြင်ရပါလို၏ ဆိုပြီးးးးး
အဲဒီ ဆုတောင်းတွေ ပြည့်တဲ့ အချိန် သူ ဝမ်းသာနိုင်တဲ့ ဘဝ မှာ ရှိမနေဘူးးလေ..
သံသရာ ဆိုတာ အရှည်ကြီးးးး
ဘဝ ဆိုတာ တိုတိုလေးး တဲ့….
ဘယ် အချိန် ဖြစ်လာမယ်မှန်းးမသိတဲ့ အကျိုးတရားးအတွက် မကောင်းတဲ့ အကြောင်းတရားး တစ်ခု ဖြစ်မလာအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းးတဲ့ သဘောပါပဲ…
အရင်ဆုံးး အမုန်းတရားးကို အရင်ဖြတ်ပါ့မယ်..!!
စိတ်ဓာတ်ကျချိန်တို့ မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့
အတွေးအမှားတွေ၊ အပြုအမူ အမှားတွေ
အဲဒီ ခနမှာ ရွဲ့ချင်စိတ်တို့ ဒေါသလေးတို့များ လိုက်လာရင် စ မိတဲ့ အကြောင်းတရားက မှားတာများတယ်။
အကျိုးဆက်ကို တွေးမိတယ် ဆိုရင်တောင် ဇွတ်လုပ်ပစ်တာများတတ်တာမို့ နောက်မှ လိုက်ရှင်းရချိန် နောင်တ က ဘာနဲ့မှ မတူဘူးးး
ဟိုတခါ ပြောဖူးတဲ့ဟာသလို ကြွက်တစ်ကောင်ကို မှားမျိုချမိလို့ အမှားပြင်ဆင်ချက် ကြွက်သတ်ဆေးလိုက်သောက်မိသလို မျိုးပဲ။
အကြောင်းရော အကျိုးဆက်ကော ဘာမှ မကောင်းဘူးး။
ဘယ် အခြေအနေဖြစ်ဖြစ် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ။
လိုရင်းကတော့ သတိ ပါပဲ။
ဒီနေ့လက်ချား အဲလေ လက်ချာ ကတော့ ဂလောက်ပါပဲ။
ဂနေ့ လက်ချား မတင် အဲလေ လက်ချာ မရိုက်ရသေးဘူးးး 😁😁😁
တညား က အင်မတန် သဝန်တို တတ်တာရယ်.. 😁😁
ပိုဆိုးတာက ကိုယ်က ဘယ်လောက် အမှန်သိသိ သူများကို စွပ်စွဲချင်ရင် ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင် အုံဖွဲ့ပြီးးကို အမှုဆင်တတ်တာ…
အစွပ်စွဲခံရသူကိုယ်တိုင် သွသူ ဇဝေဇဝါ သူတကယ် မှားသလား ထင်လာတဲ့ထိကို ယုတ်မာတတ်တာရယ်..
အဲဒါကြောင့် တော်တန်ရုံ anyhow နည်းနဲ့ မခိုင်လုံတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ လာစွပ်စွဲရင်လည်း အဲဒီလူကို သနားး/အမြင်ကပ်/သင်ပေးချင်တွေ ဖြစ်လာရော…!!
ဒီ အသက်ပိုင်းးမှာ ကိုယ်က တရားလိုနေရာရော တရားခံနေရာရော ရောက်ဖူးကြုံဖူးအပြီးမှာ Relationship တစ်ခု အတွက် အဆိုးဆုံး အကြောင်းတရားက သံသယ ဆိုတာရယ်..
သည်းမခံနိုင်စရာ အကြောင်းတရားက တွေ့ရာလူနဲ့ စွပ်စွဲ ခံရခြင်းဆိုတာရယ် သိလာတာပါပဲ…
ဥပဒေ စကားအရဆို အထင်မှားခြင်းနောက်က Motive က ဘာလဲဆိုတာ သွားသွားတွေးမိတယ်..
ဥပမာ. သူငယ်ချင်းရဲ့ ကောင်မလေးက ကိုယ်နဲ့ စွပ်စွဲတယ်ဆိုပါစို့.. ဘာကြောင့် အထင်လွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ပြန်စဉ်းစားဖြစ်တယ်..
တခါတလေ ကိုယ်တွေ အရမ်းပလူးမိနေလား, မျက်စိနောက်စရာဖြစ်နေလားစသည်ဖြင့်ပေါ့.. ကိုယ် လွန်တယ်ထင်ရင် ပြန်လျှော့ဖြစ်တယ်..
လွန်ဆွဲရမယ့် အခြေအနေတွေ မဟုတ်ဘူးလေ.. ကိုယ့် သူငယ်ချင်း အနေခက်မယ့် အထိနာမယ့် ကိစ္စမျိုး ကိုယ်က စရှောင်ရမပေါ့.. 😁😁😁
အဲ..!! ဘာ Reason မှ မရှိပဲ “ချစ်လွန်လွန်းလို့ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားပြောတာ မကြိုက်ဘူး” ဆိုတဲ့ Motive မျိုးဆို ရင်တော့ ကိုယ့်လာလုပ်ရင် အဲ့ဒီ တောက်ချိုးး ပတ်ကြမ်းသိမ်းဖို့ပဲ စဉ်းစားတယ်.. ဟိဟိ..
အဲတော့ တော်တန်ရုံ တညားကို စွပ်စွဲချင်ရင် အကြောင်းပြချက် ခိုင်ခိုင်လှလှနဲ့သာ အမှုဆင်ကြပါလို့……
အမြင် မတူတာရှိရင်လည်း ငြင်းကြပေါ့။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: အဒေါ်
ခင်ဇော် says: ဆိတ်တွေ မထိန်းနိုင်လို့
အောင် မိုးသူ says: အတူတူပဲလို့ ပြောရုံမှတပါး အခြားမရှိပြီ။
ခင်ဇော် says: မိုးသူ စွပ်ပြုတ်တွေ လည်းး မိုက်တယ်..
Thint Aye Yeik says: ဒါက ဒီလို ရှိပါတယ်။
ဟိုဟာက ဟိုလို ရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့… လာအုန်း…ပေါ့နော်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ခေါ်တိုင်းလာရအောင်
နာ့ ကို မီးသတ်ကားးမြန်းး မှတ်နေလားး
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: “ဟိုတခါ ပြောဖူးတဲ့ဟာသလို ကြွက်တစ်ကောင်ကို မှားမျိုချမိလို့ အမှားပြင်ဆင်ချက် ကြွက်သတ်ဆေးလိုက်သောက်မိသလို မျိုးပဲ။”
အဲ့ဥပမာလေးသဘောကျမိတယ်…ကျရတဲ့အကြောင်းက…အဲ့လိုမျိုးဘ၀မှာမကြာခဏလုပ်မိတတ်လို့ပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဟိ..
မြစပဲရိုး says: သို့
ဇီကလေး ၏ အဟာရဖြစ်စေမဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ် သည် အရသာ လဲ ရှိလှပေသည်။
အနှောင်အတွယ် မဲ့ လူလွတ် ဘဝ မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေခဲ့သူ မို့ လူလွတ် မိန်းမ တစ်ယောက် ၏ စိတ်ကြိုက်နေနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ကို များစွာပင် နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကိုယ်က မည်သူ့ ကို မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မျှ သဝန်တိုစရာမလိုသော စိတ်အေးသက်သာမှု ကိုလည်း များစွာပင် မွေ့ပျော်ခဲ့ပါသည်။
မည်သူကမျှ လည်း ကိုယ့်ကို မည်သည့် အကြောင်းနှင့် ချုပ်ချယ် တားဆီး မှု များ ကို မခံရသော ကိုယ့်ဘဝ ကို စိတ်ကြိုက် ထိန်းနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ကိုလည်း များစွာပင် ကျေနပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုထိုသော စိတ်ပိုင်ရှင် မိန်းမများ၏ ပြတ်သားသည့် စိတ်သဘောကို သဘောတွေ့တတ်သည့် သကောင့်သားများ ၏ စိတ် ကိုလဲ မြင်ခဲ့ ဘူးလေသည်။
ထိုထိုသော စိတ်ပိုင်ရှင် သကောင့်သားများ၏ ဘေးမှ နေ၍ ကိုယ့်လူကို ဇက်ကြိုးဆွဲဖို့ မကြိုးစားနိုင်ဘဲ မဆိုင်သူ ကို ရန်စောင်တတ်သော အမျိုးကောင်းသမီးများ ကိုလဲ စိတ်ပျက်ခဲ့ဘူးလေသည်။
လူသားတို့ကြားတွင် ၁၅၀၀ ကိလေသာ မပါဘဲ ၅၂၈ သွယ်ဖြင့် ရိုးသားစွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်သည့် လမ်း ရှိကြောင်း ကို နားလည်သင့်သည်။
ကိုယ့်ကို ဘေးထား၍ တစ်ခြားသူ ကို ပိုပြီး ကိလေသာစိတ်ဖြင့် မွေ့ပျော်နေသူ ဖြစ်နေပါက ထိုလူ နှင့် ဆက်ပြီး လမ်းသွားသင့်သလား စဉ်းစားရမည်။
ကိုယ့် မှာ ဆွဲဆောင်မှု အားနည်းတာ ဘာကြောင့်လဲ စဉ်းစားရမည်။
ကိုယ့် မှာ အားနည်းချက် အများကြီးမရှိပါဘဲ တစ်ခြား ကို မျှော်နေပါက ကိုယ်နှင့် မတန် လို့ သာဖြစ်မည်ဟု စဉ်းစားရမည်။
လူလွတ်မိန်းကလေးများ အတွက်မှာ မူကား
ကိုယ်က စိတ်ရှင်းရှင်းနေပါရက် နဲ့တစ်ဖက် မိန်းကလေးမှ ဇွတ်ကြီး လာပြီး အူတိုပြ နေပါက ကိုယ့်အနားကို လာကပ်နေသည့် သကောင့်သား ကို ကိုယ့်လူကိုယ် ထိန်းရန် သတိပေးပါ။
ဒီမှာ ဆက်ပြီး ကဲ နေသေးရင်တော့ အဲဒီ မိန်းကလေး ရှေ့မှာ ပင် ထိုသကောင့်သား ကို
“………… ……….. ……. ……. …….”.
# ဟိ ဟိ။
# ချစ်သော ဇီ ရဲ့ စွပ်ပြုတ် ကို အချဉ်လေး၊ အငံလေး၊ အစပ်လေး ထပ်ဖြည့် ကြည့်တာ။
# ထို အစွက်လေးကို “Esto no me gusta” ဟုခံစားကြရပါက “El Perdón”. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: Lol…
အရီးး ချဉ်စပ်စွပ်ထဲ ဂျာပွန်ယမ်းစိမ်းလေး ခတ်ကာ သောက်သွားပါသည်..!!
ဒီနေ့ မိုး သည်းတယ် ချစ်သော အရီး..
မြစပဲရိုး says: မိုးသီး ပါရင်တော့ ခက်မည်။ lol:-)))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1848
nozomi says: ဇီကလေး ဘာတိုက်တိုက်သောက်ချင်သား
ကြက်စွပ်ပြုတ်မတိုးတဲ့ရောဂါတွေအတွက် ဘာ တိုက်ဘို့ရှိလဲ သိချင်ပါတယ်
Novy says: “ကြက်စွပ်ပြုတ်မတိုးတဲ့ရောဂါတွေအတွက် ဘာ တိုက်ဘို့ရှိလဲ သိချင်ပါတယ်”
ခင်ဇော် says: ကျန်းးးး
နို ၂ နို လာအားးပေးးမှ
စွပ်ပြုတ် ကနေ ကြွက်သတ်ဆေး ပြောင်းရောင်းရမလို ပဲ…
ဦးကြောင်ကြီး says: မားနို မတေဒေးဘူးရား..
ဦးဦးပါလေရာ says: ဒီပိုစ့်က ကျုပ်လိုအသက်ကြီးနဲ့ ၀င်မန့်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားတော့မသိ..
((((စိတ်ထဲ အမုန်းစိတ် မဝင်အောင် ကြိုးစားနေနေရတယ်..)))) ဆိုတာလေး တွေ့လို့..
တကယ်တော့ ကျုပ် လုံးလုံးမနိုင်တဲ့အရာတွေထဲမှာ အဲ့ အမုန်း ဆိုတာလဲပါတယ်..
သူများက ကိုယ့်ကိုမုန်းမှာလဲ ကြောက်ပါတယ်..
ဒါထက်- ကိုယ်က သူများကို မုန်းရမှာတော့ အဆတရာမက ကြောက်မိတယ်..
ခင်ဇော် says: ငင့်။ ဥဥပါ
ကျနော်တော့ စာရေးချင်ချင် ကော်မန့်ပေးချင်ချင် ကိုယ့် အသက်ကို မေ့ထားပြီးမှ ရေးတယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘောင်ခတ်တဲ့ ကိစ္စ.. အဲဒါ အတော်ဆိုးတယ်… လူတင်မကဘူ.. မျက်လုံးပါ ဘောင်ခတ်ထားတော့ ပိုဆိုး.. ငါ့များ ဘာမှတ်နေလဲ..
ငါ့ကို ဒါမျိုးလာလုပ်လို့ ရမလား…
အဲဒီ ငါ ငါ ငါ တွေနဲ့ သည်းခံစိတ်မွေးမရဘဲ… တုံ့ပြန်တယ်.. အမုန်းတရားတွေ မွေးတယ်…
Emotional Control အတွက် ဘာလုပ်ရမယ်မသိသေး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: သတိ လေး ကပ်ရုံပါပဲ။
kai says: အင်း… တကယ်စွပ်ပြုတ်မှတ်လို့.. လူပမာစာဆိုမုန်းတာနဲ့.. ရှောင်နေတာ..။
ဒီနေ့တော့ ဟင်းချက်လေးတော့ကြည့်ဦးမှပါလေ.. ဆိုပြီးဝင်ကြည့်…။
အမုန်းတို့.. သံသယတို့.. ဘာတို့ညာတို့…
အရသာရှိမယ့်ပုံ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒါမျိုး က အတော်လေးမြင့်တဲ့ high heels စီးတတ် မှ နားလည်ခံစားနိုင်မှာမို့ သူကြီးမင်း နားလည်ချင်ရင် ပိပိလေး ဆီက ငှားစီးကြည့်လိုက်ပါဦးလို့စ်။ ပြီးရင် ပြန်လာပြီး ထပ်ဖတ်ကြည့်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဒါမိုးတွေ က
တဂျီးလို စက်ရုပ်လူသားဂျီးဒွေ နားလည်မှာ မီဟုပါဘူးးး
လူမမာစာ မကြိုက်ဘူးး ဟလားးး
နာလန်ထ လူမမာ တွေ စားဝင်မယ့် ဟင်းစပ်မျိုးတွေ ရေးမလို့ဟာကို..
၇ ရက်ပြည့်အောင် စဉ်းစားလိုက်အူးမယ်..
Yae Myae Tha Ninn says: ပထမတခုမှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Boundless ဆိုပြီး အဲဒီ Boundless ဆိုတဲ့ Bound ထဲမှာ နေသွားရတာ သတိထားမိပါတယ်…
ဒုတိယကတော့ အနော်က မမုန်းတတ်ဘူး… တောက်မြင်ကပ်တာပဲ ရှိတယ်… အဟဲ… မဟုတ်ရင် သတ်ပစ်ချင်တယ်ကို ကျော်သွားတယ်…
တတိယကတော့ တယောက်တည်းရှိနေချိန်မှ မဟုတ်ဘူး… စိတ်ကလေး ဒါမှမဟုတ် လူကလေးက အားနေရင် မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဘဲ ဦးတည်တယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်…
စတုတ္ထတခုကတော့ နုစဉ်က ခဏခဏ ကြုံဖူးတယ်… စွပ်စွဲတဲ့ သူတိုင်းက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သီလမလုံ ဒါမှမဟုတ် သစ္စာဖောက်ဖူးလို့လို့ ခံယူမိတာပဲ…
ကျေးဇူးတင်မားလယ်…. သိသလိုလိုနဲ့ ၀င်ဖောသွားပါတယ်… :P
ခင်ဇော် says: ဘောင်မရှိသော ဘောင်ထဲ ကို ရောက်သွားတာပေါ့ နင်းနင်းရေ..
အမ ကို အရင်က ဆုံးမတဲ့ သူတွေ ကို ပြန် ကက်ကက်လန်ခဲ့ ဘူးတဲ့ စကားပေါ့..
သဘောပေါက်တာပြီး ဝင်ဆွေးနွေးတာကို ကျေးဇူးပါ.
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: 1.ကွကိုယ်တော့ တော်တန်ရုံ ဘောင်ခတ်လေ့မရှိ..
သူများတွေ လာလာခတ်သွားကြတာ 2.မုန်းသလားဆို မမုန်းဘူး.. ငြှိုးပဲငြှိုးတာ
အခွင့်မကြုံသေးရင် အေးဆေး ကြုံလာရင်လာထားပဲ 3.အသည်းမကွဲဖူးလို့ ကျန်တာ၃ခုဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ တျောက်ထဲပျင်းပျင်းနဲ့ လေတာပဲများပါတယ် အထွေအထူးမရှိ …
အဟဲ ဒေါသထွက်ရင် ဘာမှမမြင်တော့ဘူး သတိကတော့ မမိတမိပဲ 4.လက်ရှိအခြေအနေအရတော့ အဲလိုအထင်လွဲ အမြင်လွဲမခံရဘူးသေးတော့ မသိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဟိဟိ။
သူများ သတ်မှတ်တဲ့ သတ်မှတ်ချက် ဘောင်လောက်ကတော့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်ဟေ့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်။
ဘာလို့ဆို နောက်ဆုံး သူတို့ က သညားကို သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ဘောင်က အရူးမ တဲ့။ အရူးဘောင်ထဲ နေရတာ နာမည်သာဆိုးတာ ကြိုက်တာ လုပ်လို့ရတယ်။
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ဟီဟိ..ဟုတ်တယ်..ပျင်းတာလဲ နာမည်သာဆိုးတာ
လူသက်သာဒယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အချစ်အမုံးဆိုတာမျိုးကတော့ မြင်းမြင်းချင်း အဲလေမြင်မြင်ချင်း အသလွတ်ကျိမရတတ်တာမိုး ဘာလုပ်လုပ် အပြစ်မတင်ရက်တာမိုးတွေကရှိတတ်တယ်ဟ ..
ဆက်ဆံရေးမှာကျတော့ ပါစင်နယ်ဖီလင်တွေဖယ်ထားပီး ကွကိုယ် fair ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတာပဲ
ဒါနဲ့ သံခမောက်ပို့ပေးရမား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အေးးဆို..
ကိုယ့် အပေါ်ကောင်း/မကောင်းလည်း မခွဲခြားဘူးး…
ခင်ဇော် ခွဲခြားဆက်ဆံတာ လူ၂ မျိုးပဲရှိတယ်..
ကိုယ် က ချစ်တဲ့ သူရယ် ကိုယ်က မချစ်တဲ့ သူရယ်..!! (ကိုယ် ချစ်တဲ့ သူတော့ များပါတယ် ဟိ) 😁😁😁